I-Television System kaPaul Nipkow
Imbali yeThelevishini - uPaul Nipkow
UPaul Nipkow ucetywayo kwaye unelungelo lobunikazi kwinkqubo yokuqala yoonomathotholo lwe-electromechanical
Umfundi wezobunjineli waseJamani, uPaul Nipkow wanconywa kunye nomenzi wamalungelo omhlaba wokuqala we-TV ngomnyaka we-1884. UPaul Nipkow wacwangcisa ingcamango yokutshatyalaliswa komfanekiso aze awutlulise ngokulandelelana. Ukwenza oku, wakha icebo lokuqala lokuskena ithelevishini. UPaul Nipkow wayengumntu wokuqala ukufumana umtshini wokukhangela umabonwakude, apho ubuchule bokukhanya bezinto ezincinci zomfanekiso zihlaziywa kwaye zihanjiswa.
Ngomnyaka we-1873, iipropati ze-photoconductive ze-selenium zafunyanwa, ukuba i- selenium yocandelo lokuqhuba umbane lalihluka kunye nenani lokukhanyisa elifunyenweyo. UPaul Nipkow wadala ikhamera ye-disk ejikelezayo ebizwa ngokuba yi disk Nipkow, isicatshulwa sokuhlaziya imifanekiso esakhiwa yidiski ejikelezayo ngokukhawuleza ibekwe phakathi kwesimo kunye nesicatshulwa se-selenium esicacileyo. Umfanekiso wawuneendlela ezili-18 kuphela zesisombululo.
Ngokutsho kukaRJ Reiman umbhali we-Whovented Television: I diski ye-Nipkow yayiyi diski ejikelezayo kunye nemingxuma ehleliwe ngokujikeleza. Ukukhanya kudlula emingxeni njengoko i-disk ijikeleza ivelise iphethini yeskrini yokukhangela okanye i-raster engasetyenziselwa ukuvelisa umbane wombane kwindawo yokuhambisa okanye ukuvelisa umfanekiso ukusuka kumqondiso kummkeli. Njengoko idiski yajikeleza, umfanekiso wawuchithwa yi-perk in disk, kwaye ukukhanya okuvela kwiindawo ezahlukileyo zadlulela kwi-selenium photocell.
Inombolo yemigca ekhishweyo yayilingana nenani leempembelelo kwaye ukujikeleza nganye kwidiski kukhupha isiqulatho somabonwakude. Kwi-receiver, ukukhanya kobume bokukhanya bekuyahlukahluka ngombane wesignali. Kwakhona, ukukhanya kudlulile kwi disk ejikelezayo ejikelezayo kunye ne-raster kwi-screen screen.
Ababukeli beemishini babenomda wokunciphisa ubunzulu kunye nokukhanya.
Akukho mntu oqinisekileyo ukuba ngaba uPaul Nipkow wakha iprototype esebenzayo yenkqubo yethelevishini. Kuza kuthatha ukuphuculwa kwe-tube amplification ngo-1907 ngaphambi kokuba iNipkow Disk ibe yinto ebonakalayo. Zonke iinkqubo zethelevishini zemishini zangekho ngonyaka ka-1934 ngeenkqubo zethelevishini.
Mmm Mmm Good: Imbali yeCampbell's Soup
Ngaba uLeonardo da Vinci Gay?
Izidingo zokufumana umtshato kwiCawa yamaKatolika
Iphi na i-Concert ye-Elvis Presley yokugqibela?
Hayi, uBill Gates akazange anike iThg Young Young $ 9 Million ukuyeka ukwenza uMculo
Sea Cow yaseStaneller
Amagama aseNtaliyane aseNtaliyane
Ukubukwa kweeFilimu emva kweMva
Ngubani owasungula iwashi?
Ukugqithwa kweeMifanekiso, iiMidlalo, kunye neMidlalo eJamani
Iinqwelo zokutya kunye neeTube zokutya: Yintoni eyahlukileyo?
Top 10 Jimi Hendrix Iingoma
Izigulane Udla Ngamhla
Ingxelo yeScorpio: I-Occult kunye neNkcubeko
Imbali & Ixesha leMathematika yeVedic
Amadama kunye neeReervoirs
Imayini yamalahle: Iimeko zokuSebenza e-UK Ngethuba loPhuculo lweZoshishino